Wednesday March 22, 2017 - 19:25:10 in Wararka by Super Admin
Dagaallo culus ayaa lagasoo sheegayaa inta badan jabhadaha dagaalka wadanka Suuriya ee laysku hor fadhiyo xilli kacdoonka wadankaasi ka socda uu lugta lagalay sanaddii 7-aad oo xiriir ah.
Wararka ka imaanaya gobolka Xammaah ee dhaca bartamaha dalka Suuriya ayaa sheegaya in jamaacada Hay’adda Xureynta Shaam ay xamlo dagaaleed ballaaran uga dhawaaqeen deegaano kaabiga ku haaya magaalada caasimadda ah u gobolkaasi.
Ragga Firfircoon ee soo tabiya dagaalka Suuriya ayaa soo sheegay in duullaanka ballaaran ee mujaahidiintu ka bilaabeen gobolka Xammaah lagu daah furay camaliyaad istish-haadi ah kuwaasi oo lala beegsaday saldhigyada waaweyn ee melleteriga Suuriya ku sugnaayeen.
Bayaan kasoo baxay hay’adda Xureynta Shaam ayaa lagu sheegay in Xoogagoodu ay dagaal culus ka bilaabeen waqooyiga gobolka Xamaah ujeedkuna uu yahay in macrakadu soo gaarto magaalada xammaah oo saldhigyo waaweyn ay ku leeyihiin ciidanka Nidaamka.
Hay’adda xureynta Shaam waxay muslimiinta ugu bishaaraysay in dagaallo malxamad ah kadib ay qabsadeen labada degmo ee kala ah Mucardas iyo Sowraan, qabashada labadan degmo ayaa ka dhigan in mujaahidiintu ay kulaalayaan magaalada xarunta u ah gobolka Xammaah.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in dagaallo culus ay ka socdeen mandiqadda Assabaahi islamarkaana tobaneeyo katirsan maleeshiyaadka nuseyriyiinta lagu dilay dagaallada.
Dhinaca kale dagaallo culus ayaa lagasoo sheegayaa xaafado katirsan magaalada dimishiq ee caasimadda u ah wadanka Suuriya.
xoogaga mucaaradka ayaa la sheegay in ay si buuxda ula wareegeen mandiqadda Karaj Alcabaasiyiin ee magaalada dimishiq iyagoona difaacday xaafadda Jowbar oo maalmo ka hor ay nidaamka ka qabsadeen.
dagaallo is riix riix ah ayaa lagasoo sheegayaa xaafadaha magaalada caasimadda u ah wadanka Suuriya, xoogaga islaamiga ah ayaa dadaal ugu jira in dhowr xaafadood ay ka qabsadaan dimishiq si cadaadis dhan walba ah ay usaaraan ciidanka nidaamiga ah iyo maleeshiyaadka shiicada ah ee kaabaya.